Muuse Biixi oo Wasiirada Cusub ku Dhaariyey Inaanay ka War Sheekoon - somalilandlivemedia
Muuse Biixi oo Wasiirada Cusub ku Dhaariyey Inaanay ka War Sheekoon
13:28 18. December 2017
Hargeysa( SLL-Yool)-Madaxweynaha Kub-ku-siigaalaha kursiga ku ah Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa fadhigii u horreeyey ee xubnaha golihiisa cusub u la yeesho oo shalay ka dhacay qasriga Madaxtooyadda, waxa uu xubnaha Dhaar baalaha ku jaray Kitaabka Qur’aanka Kariimka, si ka baxsan Dhaarta Dastuuriga ah ee u jiddeeyey Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland. Kaddib markii hal-hal saddex walle bile lagu mariyey inay xafidi doonaan Sirta Golaha Wasiirada iyo Sirta Qaranka.
Fadhiga Madaxweyne Biixi iyo fadhiga golihiisa cusub, oo Afhayeenku Saxaafadda uga warbixiyey kolkii kulanku dhamaaday, waxa uu yidhi; “..Waxa dhamaan golaha Wasiiradda lagu dhaariyey Kitaabka Qur’aanka Kariimka, inay ilaaliyan Sirta Golaha Wasiiradda iyo Sirta Qaranka”. xubnihii golaha wasiiradda cusub ee fadhiga Shalay kasoo xaadiray oo tiradoodu dhamayd 31-wasiir iyo ku-xigeeno.
Hab-dhaqanka Dhaarta ugubka ah, Mujaahid Muuse Biixi, ku furay fadhigii u horreeyey ee golihiisa cusub, ayaa waxay noqoneysaa mid qayrul-sharci ah, oo meelnaba aan kasoo gelin Dastuurka iyo shuruucda ka farcamay ee Jamhuuriyadda Somaliland. Dastuurka qaranku waxa uu jiddeeyey hal-dhaar, sida ku cad qodobka Qodobka 94aad ee Dastuurka, Farqadihiisa 1aad iyo 3aad, kuwasoo u dhigan sidan; “.. Qodobka 94aad Golaha Wasiirada
2. Waxaa Wasiirada iyo Wasiir-ku-xigeennada magacaabi kara ama xilka ka qaadi kara Madaxweynaha; waxaana magacaabiddooda la hor dhigayaa Golaha Wakiilada oo ay fadhigaas joogaan kala badh iyo hal xubnood (Quorum), oo ku oggolaan kara ama ku diidi kara cod hal dheeri ah (Simple Majority) oo gacan taag ah.
3. Soddon (30) maalmood gudohood marka Golaha Wakiiladu ansixiyaan magacaabidda Wasiir ama Wasiir-ku-xigeen, waxa xilka u dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamadda Sare iyada oo uu goob joog yahay Madaxweynaha ama Madaxweyne-ku-xigeenka, haddii uu Madaxweynuhu ka maqan yahay dalka ama uu buko..”.
Haddaba, sida Distuurku ba tilmaamay kol hadii dhaarta sharciga ah ee Golaha Wasiiradu sidaa tahay, waxa isweydiintu tahay, maxay iftiiminayasaa dhaarta sharci-darradda ah ee shalay lagu dhaariyey xubnaha saaxadda ku cusub?, waxa hubaal ah in talaabaddaasi iftiimisay laba qoddob midkood inuu jiro, kuwaasoo kala ah inay Madaxweynaha aarrinkan aqoondarro maamul iyo sharci ka keeneen iyo sidoo kale inay ku kaliftay tallaabadaas iyadda ah aamin darro iyo kalsooni xumo uu ka qabo golihiisa cusub.
Xaflada Daah-furkii Qaadashada Kaadhka Codbixinta Ee Gobolka Sanaag Video
Ku Simaha Madaxweyne Siilaanyo Oo Madaxtooyada Ku Qaabiley Wefti Ka Socda Dowlada Maraykanka Video
Maayarkii Hore Ee Magaalada Berbera Cabdle Sandheere Oo Shaaca Ka Qaadey Inuu Ku Biirayo Xisbiga WADDANI Video
Newer PostCiidamada Booliiska Somaliland Ayaa Hada Xaqiijiyay In La Xidhay Cabdiraxmaan Dabcasar Oo Baraha Bulshada inta badan caan ka ah kana soo muuqda, maalmahan danbena ku sugnaa Hargeysa waxanay sheegeen sababtay u xidheen
Older Post Wasiirada Wayda ah ee Golaha Cusub, Kuwa Sharcigu Diidan-yahay iyo Kuwa Aqoonta ku Hadhay